Waxaa barakeysan Yin Yang Black Onyx iyo hooyada dhashay Pearl Pendant (14K) - Popular Jewelry
Waxaa barakeysan Yin Yang Black Onyx iyo hooyada dhashay Pearl Pendant (14K)
A Yin Yang waa mid leh calaamada Shiinaha ee 'barakeysan' xarunteeda. Hooyada luulku waxay matalaysaa Yin halka dusha madowna ay u taagan tahay Yang.
Gemstone: Madow Onyx iyo Hooyo luul
Dherer: 33.35 mm * (1.31 inji)
Ballac: 25.10 mm * (0.99 inji)
Qiyaas. Miisaan: ~ 4.1 garaam *
Adeegga macaamilku wuxuu ahaa AMAZING. Si dhakhso leh ayey u rarteen. Waxay ahaayeen kuwo naxariis badan. Way ka maqnaayeen labadii shay ee aan doonayay laakiin si toos ah ayay i-meel iigu soo direen ikhtiyaar kale. Tani waxay noqon doontaa meesha ugu muhiimsan ee aan ka iibsado!